Ady amin’ny herisetra : nanentana tanora tao Andoharanofotsy ny ECPAT France
Publié juillet 7, 2018 par Book News
Nanentana tanora lahy tao Andoharanofotsy hiala amin’ny herisetra ny fikambanana tsy miankina ECPAT France.
Fanentanana tanora ataon’ny ECPAT France
Tanora lehilahy miisa 20 ao amin’ny Kaominina Andoharanofotsy no nahazo fanentanana momba ny ady amin’ny herisetra avy amin’ny fikambanana tsy miankina Ecpat France.
Fanentanana izay naharitra iray volana ary mbola hitohy amin’ny lohahevitra momban’ny « genre et sexualité » na ny “fitovian-jo sy ny fananahana” ny iray volana manaraka.[amazon_link asins=’B004JPKKY8,B073TRP3J8,B00HHT9MPQ,B071771VPS’ template=’ProductCarousel’ store=’booknewsmada7-21′ marketplace=’FR’ link_id=’623613d3-81f2-11e8-8e83-6f0c8371e3b0′]
Ny Ecpat France sy ny fikambanana Tandem Analamanga no miara miasa amin’ny fanatanterahana ity fanentanana ity. Toerana efatra (4) no hiasan’izy ireo ka anisan’izany ny ao amin’ny Kaominina Andoharanofotsy.
Nandritra ny fanentanana no nahampafantarana ireo tanora ny mahakasika ny herisetra, ny karazany, antony mahatonga azy, ny fomba fisehoany, ny fiantraikany ary ny ady atao amin’ny herisetra.
« Ny lehilahy no tena mpanao ny herisetra », hoy Hobiharinosy Andomanitra Mahery, tomponandraikitra ao amin’ny Fikambanana Tandem Analamanga. Antony mahatonga izany ny fiheveran’ny lehilahy ny tenany ho matanjaka sy mahery ».
Ireo tanora mpanentana avy amin’ny fikambanana Tandem Analamanga.
Noho izany, nampivondrona sy nanentana ny tanora lehilahy izy ireo. Niezaka nampita amin’izy ireo ny ady amin’ny fanararaotana mamoafady. Tsy misy ny fanavahana na iharan’ny herisetra na mpanao herisetra ho an’ireo tanora lehilahy nohentanina.
« Tafita ny hafatra satria niova fitondratena ny lehilahy. Ezahina hamafisina kosa izay mbola tsy azon’ireo mpandray anjara », hoy hatrany i Hobiharinosy Andomanitra Mahery.
Misy karazany samihafa ny herisetra
« Misy karazany maro ny herisetra toa ny fikasian-tanana sy ny fisotroana zava maha-domelina ary ny fanararaotana ara-nofo. Ireo no mateti-pitranga », hoy Rakotoarisoa Tsitoniaina, mpikambana ao amin’ny Tandem Analamanga. Mbola misy ireo olona iharan’ny herisetra tsy mahasahy mitory ». Tahotra amin’ny valifaty sy ny fisian’ny kolikoly no antony mahatonga izany », hoy izy.
Zava-dehibe ho an’ireo tanora lehilahy ny fisian’ny fanentanana toa izao.
« Nahazoan’izy ireo fahalalana vaovao toy ny fahafantarana ny karazana herisetra sy ny ady atao amin’izany », hoy Laza, 21ans, mpianatra mipetraka eny Andoharanofotsy.
« Mila entanina ny vehivavy tsy hanao akanjo manintona ny lehilahy. Entanina ihany koa ny lehilahy mba tsy hifoka rongony satria ireny no mitarika ny herisetra. Efa fiainana an-davananandro ho azy ny ady amin’ny herisetra ary hanentana ny manodidina azy izy », araka ny nambarany.
Laza, 21 taona, mpianatra nanaraka ny fiofanana.
Misy ny lalàna mandrara ny fampiasana zaza tsy ampy taona
« Hampitombo fahalalana momban’ny herisetra sy hiady amin’izany no antony nahatonga azy nandray anjara amin’izao fanentanana ataon’ny Ecpat izao », hoy i Jefine, 21ans, mpianatra mipetraka eny Andoharanofotsy.
Jefine, 21 taona, mpianatra nanaraka ny fiofanana.
Nandritra izao fanentanana nataon’ny Ecpat izao ihany koa.no nahafantarany ny lalana mandrara ny fampiasana ny zaza tsy ampy taona.
Tsara ny manamarika fa ny fikambanana tsy miankina ECPAT France dia fikambanana miaro ny zon’ny ankizy manoloana ny herisetra fanararaotana ara-nofo mpahazo ny ankizy.
Fampiofanana ireo tovolahy tao Andoharanofotsy.
cc: Ecpat France
Araka ny asa ifantohan’ny ECPAT sy ny Fanambaran’ny Stockholm, ny fikambanana dia mamporisika ireo Tomponandraikitra ara-panjakana sy ny mpisehatra ara-toe-karena hanaja ny zon’ny ankizy mba hialana amin’ny fanararaotana ara-nofo ho an’ny ankizy izay miendrika fitadiavam-bola.
Amin’ny alalan’ny paik’ady maro sy ny fahitana ny tontolo manodidina ny ankizy, ny ECPAT France dia miditra an-tsehatra, miady amin’ny fanararaotana ara-nofo izay miendrika fitadiavam-bola. Ahitana io ady amin’ny herisetraaera-nofo mpahazo ny ankizy ao France sy maneran-tany. Misy ny fiaraha miasa amin’ireo mpiara miasa sy ny mpisehatra rehetra ao anatin’ny firenena ho fanatanterahana io ezaka lehibe io.
Eo amin’ny fanatanterahana ny asa an-davanandro sy ny fanarahamaso ireo asa dia misy ny soatoavina hifampizaran’ity fikambanana ity.
Jerena manokana ny tombotsoa ambonin’ny ankizy. Ny Ecpat France dia mametraka ny ankizy ho ivon’ny asa rehetra. Mijery mandrakariva ny tombontsoan’ny ankizy amin’ny asa sy ny tanjona rehetra. Ny fihainoana sy ny fanajana ny akizy no laharam-pahamehana ho an’ity fikambanana ity.
Zava-dehibe ihany koa ny fandraisan’ny ankizy anjara. Raisina to any tomponandraikitra amin’ny fampandrosoana ny tenany ny ankizy. Mampitombo ny fahalalan’ireo ankizy araka izany ny ECPAT mba ahafan’ izy ireo manatanteraka ny tetikasany. Izany rehetra izany dia atao anatin’ny fanajana ny safidin’ny ankizy sy ny fahalalany.
Ny ECPAT France dia manampy ny ankizy, tsy misy fanavahana, manaja ny zom-pirenena, ny kolontsaina, ny finoana, ny maha lahy sy maha vavy, ny fihaviana ara-poko, ny toe-batana sy ny toe-tsaina n any toerana misy azy eo amin’ny sehatra ara-toekarena sy ara-tsosialy.
Ny ECPAT France dia miara miasa amin’ireo fikambanana sy ny mpisehatra rehetra voakasika amin’ny ady amin’ny herisetra mpahazo ny ankizy. Fiarahamiasa izay mifototra amin’ny fanantanterahana ireo asa ahitan’ireo ankizy tombotsoa ao anatin’ny fomba fijery mifameno, fanatsarana ny fahaiza manao ary ny fifanampiana eo amin’ny mpiara miasa.